မာဒါဂက်စကာ - Makay အစုလိုက်အပြုံလိုက်၊ ကာကွယ်ရန်Edဒင် - Jeune Afrique - teles relay
By Tele RELAY တစ်ခု On အောက်တိုဘာ 25, 2020
အဆိုပါMusée des Confluences de Lyon သည် Makay အစုလိုက်အပြုံလိုက်ပြသမှုကိုပြသနေသည်။ မဂ်ဂတ်စကာ၏အနောက်တောင်ဘက်ရှိအနည်းငယ်မျှသာစူးစမ်းလေ့လာခဲ့သောဒေသသည်၎င်း၏မယုံနိုင်စရာဇီ ၀ မျိုးကွဲများကြောင့်ကျော်ကြားသော်လည်းလူတို့၏လုပ်ဆောင်မှုကြောင့်ခြိမ်းခြောက်နေသည်။
၎င်းကို ၀ င်ရောက်ရန်ခဲယဉ်းသည်။ သို့သော်ထိုသို့ရောက်သူသည်အနံ့နှင့်ဆူညံသံများဖြင့်ချက်ချင်းပင်တိုက်ခိုက်သည်။ အရင်းအမြစ်ကိုဘယ်တော့မျှဆုံးဖြတ်ရန်မလွယ်ကူပါ။ တိရိစ္ဆာန်များ? အပင်များလား ပန်းတစ်ပွင့်၏အနံ့ရနံ့၊ အစေး၏မွှေးသောရနံ့များ၊ ရေများတဟုန်းဟုန်းခြင်းနှင့်ဖားတစ်ကောင်၏တုန်လှုပ်ချောက်ချားနေသောငှက်တစ်ကောင်၏နက်ရှိုင်းသောသီချင်းနှင့်လူးမာ၏ငိုသံကိုသင်မည်သို့ခွဲခြားသနည်း။
မာဒါဂက်စကာအနောက်တောင်ပိုင်းရှိမက္ကကေးချောက်ကြီး၏မပြိုကွဲနိုင်သောဓာတ်ခွဲခန်းသည်ယနေ့ကမ္ဘာပေါ်တွင်လူသိအများဆုံးသောဒေသများအနက်မှတစ်ခုအပါအ ၀ င်ဖြစ်ပြီးပျက်စီးလွယ်ဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်လိုင်ယွန်ရှိMusée des Confluences သည်သူအား ၂၀၂၁၊ သြဂုတ်လ ၂၂ ရက်အထိ“ Makay, ခိုလှုံရာ” ခေါင်းစဉ်အောက်တွင် Yoann Cormier မှဒီဇိုင်းရေးဆွဲသောသူ၏ပြသရန်အတွက်ပြသရန်ရည်ရွယ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
၇၄၀ မီတာကျော်ခန့်ရှိသောလူငယ်များနှင့်လူကြီးများအတွက်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောဒီဇိုင်းသည် visit ည့်သည်တစ် ဦး စီအားသူ၏ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုလေးစားသောသိပ္ပံနည်းကျစူးစမ်းသူအဖြစ်ပြောင်းလဲရန်ရည်ရွယ်သည်။ သိသာထင်ရှားတဲ့အချက်ကခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ကီလိုမီတာ ၄၀၀၀ လောက်ကစပြီးစူးစမ်းလေ့လာတာကစိုစွတ်မှုသိပ်မရှိဘူး။ သို့သော်၎င်းသည်သင့်အားပိုမိုသိလိုစေရန်လုံလောက်သည်။
မက္ကာအစုလိုက်အပြုံလိုက်အစုလိုက်အပြုံလိုက်မတူကွဲပြားသောကမ္ဘာနှစ်ခုနှင့်အတူတကွစုဝေးနေသောမူလမြေမျက်နှာသွင်ပြင်နှင့်နယ်မြေတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကုန်းပြင်မြင့်များ၊ သွေ့ခြောက်သော၊ လေထန်သောနေရာများနှင့်စိမ်းလန်းစိုပြည်သောအသီးအရွက်များကြောင့်ကျူးကျော်မြူပင်များစိုစွတ်သောနက်နဲသောပင်လယ်ဖြစ်သည်။ ကြွယ်ဝပြီးမတူညီသောသတ္တဝါများနေထိုင်ရာဒေသဖြစ်သည်။
မူလကလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းသန်း ၂၀၀ တွင်ရေနှင့်ထိတွေ့မိသောအလွယ်တကူပြိုကွဲသွားသောကျောက်တုံးများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသောတောင်များရှိသည်။ တိုက်စားမှုကြောင့်သကြားမုန့်တောင်များကိုခွဲခြားသည့်နက်ရှိုင်းသောချိုင့်ဝှမ်းများဖန်တီးနိုင်ခဲ့သည်။ ဘူမိဗေဒပညာရှင်များကယခုအခါမျက်လုံးမှ Jurassic သဲကျောက်များကမ်းလှမ်းထားသောထူးဆန်းသည့်ရှုထောင့်ကိုဖော်ထုတ်ရန်“ ပျက်စီးခြင်းကယ်ဆယ်ရေး” အကြောင်းပြောကြသည်။ အပေါ်မှမြင်ရသောအရာတစ်ခုလုံးသည်အစိမ်းရောင်လိုင်းများဖြင့်ပြည့်နေသောအနီရောင်ဆံပင်ကောက်ကောက်များနှင့်တူသည် - သို့မဟုတ်ပြပွဲစီစဉ်သူများကရေးသားသည့်အတိုင်းgရာမကျောရိုး)
Big ကျွန်းတစ်ခုလုံးသည်၎င်း၏မယုံနိုင်လောက်သောဇီဝမျိုးကွဲများကြောင့်ကျော်ကြားပြီးနှင့်အထူးသဖြင့်၎င်း၏ထူးခြားသောအစုလိုက်အပြုံလိုက်နှုန်း (အကန့်အသတ်ရှိသောပထဝီနယ်မြေအတွင်းဇီဝဗေဒဆိုင်ရာအုပ်စုတည်ရှိမှု) ကြောင့်ကျော်ကြားပြီးပါက Makay သည်အားလုံးကိုမပေးနိုင်သေးပါ ၎င်း၏လျှို့ဝှက်ချက်များ။ ထို့အပြင်အကြောင်းကောင်း ရှိ၍ ၎င်းသည်သိပ္ပံပညာရှင်များမှဆယ်နှစ်သာစူးစမ်းလေ့လာခဲ့သည်။
ပြင်သစ်ဂေဟဗေဒပညာရှင် Nicolas Hulot၊ မက်ဒါဂက်စကာ dogfish၊ ချုံဝက်၊ အရွက်နှာခေါင်းမြွေ၊ Ranomafana ၏မီးခိုးရောင် Hapalemur၊ ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းပခုံးတို့ကိုအသုံးပြုရန်ဤသဘာဝဘေးကင်းလုံခြုံမှုတွင် အဖြူရောင်ဖြင့်သုံးသောဇီးကွက်၊ မာလဂက်စီလူမျိုး drongo၊ ကြယ်တံခွန်ကြယ်တံခွန်၊ Verreaux's sifaka နှင့်ရေထဲတွင် pachypanchax ဤစာရင်းသည်ပြည့်စုံလုံလောက်မှုမရှိသေးပါ။ ၎င်းပြပွဲကသင့်အားအခြားရိုက်ကူးထားသော၊ ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးခြင်း၊
© Evrard Wendenbaum - Naturevolution သည်ဆင်ခြေလျှောရှိ Furcifer viridis
ဤချမ်းသာကြွယ်ဝမှုကိုတိုင်းတာရန်နှင့်ပြင်သစ်နိုင်ငံကိုမာဒါဂက်စကာသို့ချည်နှောင်ထားသည့်သမိုင်းဝင်ကိုလိုနီနယ်နိမိတ်ကိုဖြတ်သန်းစဉ်မှတ်မိစေရန် - ယိုအန်ကော်မန်းသည်သဘာဝသားအဲဖရက်ဂရန်းဒီဒီယာ၏စွယ်စုံကျမ်းလက်ရာ၏အလုပ် ၃၆ ခုကိုသူ့သားဂီလျူကဆက်လက်တင်ပြသည်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ သဘာဝနှင့်နိုင်ငံရေးသမိုင်း ၁၈၇၅ မှ ၁၉၃၇ အကြားထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ပထဝီဝင်အဖွဲ့အစည်းနှင့်ပဲရစ်၏သဘာဝသမိုင်းပြတိုက်တို့မှအထောက်အကူပြုသည့်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးလေ့လာရေးအကောင့်မြောက်မြားစွာသောအရောင်ပုံသဏ္sာန်များပါ ၀ င်ပြီးထိုအဖြစ်အပျက်အတွက်ဒီဂျစ်တယ်နှင့်တိရစ္ဆာန်များ၏မတူကွဲပြားမှုများနှင့် ကျွန်း Flora ။
သတင်းဆိုးများ၊ သို့သော်မျှော်လင့်ထားသင့်သည်မှာယနေ့ဤထူးခြားသောကြွယ်ဝမှုကိုခြိမ်းခြောက်နေသည်။ အထူးသဖြင့်မီးလောင်မှုကြောင့်ဖြစ်သည်။ “ သွယ်ဝိုက်”၊ ခုတ်ထွင်ခြင်းနှင့်လောင်ကျွမ်းခြင်းကိုကျင့်သုံးခြင်းအားဖြင့်လူ ဦး ရေသည်ဆာဗားနားနှင့်သစ်တောများကိုကျက်စားရာအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲပေးသည်။ “ အံ့သြဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်သက်သာစွာဖြင့်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခဲ့သော Makay ၏အဓိကသစ်တောများသည်ယနေ့ခေတ်တောမီးလောင်မှုနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်လူ ဦး ရေ၏စားနပ်ရိက္ခာမလုံခြုံမှုကြောင့်ခြိမ်းခြောက်လျက်ရှိသည်” ဟုစီစဉ်သူများကရေးသားခဲ့သည်။ ဤဒေသသည်ရှားရှားပါးပါးဂေဟစနစ်၏ပုံဥပမာဖြစ်သည်၊ မသိရ၊ လက်လှမ်းမမှီနိုင်သော၊ "
လက်လှမ်းမမှီ? တကယ်မဟုတ်ဘူး။ ခဲယဉ်းသည်။ ထိုမှတပါး, zebu သူခိုးများ, ဟာဟာဂို, မှားမဟုတ် ... ... တစ်ခါတစ်ရံတွင်သူတို့သည်နွားများကိုဝိုင်းရံခြင်းနှင့်တစ်ခါတစ်ရံကျေးရွာများကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းပြီးနောက် Makay တွင်ခိုလှုံကြသည်။ pathos မပါဘဲခိုင်မာသောပုံများပါ ၀ င်ပြီးတောမီးလောင်နေသောဤဗီဒီယိုကဲ့သို့သောသို့မဟုတ်တောင်အာဖရိကအနုပညာရှင် Daniel Naudéမှလက်မှတ်ထိုးထားသော zebus ၏ဓာတ်ပုံများကဲ့သို့ပြပွဲမှသတင်းနှင့်သတိပေးချက်။
သဘာဝပတ် ၀ န်းကျင်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းသဘာဝတရားကိုပူးတွဲတည်ထောင်သူ၊ အီဗရာဒ်ဗင်ဒန်ဘွမ်သည်၎င်း၏ဒီဇိုင်းတွင်အဓိကအခန်းကဏ္ played မှပါ ၀ င်ခဲ့ပြီးအထူးသဖြင့်လူမျိုးပေါင်းစုံမှသုတေသီများနှင့်ကျောင်းသားများကိုလမ်းပြပေးခြင်းဖြင့်ဤထူးခြားသောofရိယာကိုကာကွယ်ရန် ၁၀ နှစ်ကျော်ပါဝင်ခဲ့သည်။
၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၂၂ ရက်အထိ Lyon (ပြင်သစ်) ရှိMusée des Confluences ၌ "မာဂတ်စီပြည်ရှိခိုလှုံရာ Makay" ပြပွဲ၏ပိုစတာ။ ©Musée des confluences
ထိုအဆက်မပြတ်သိပ္ပံနည်းကျမစ်ရှင်များသည် Makay ၏အကာအကွယ်ပေးထားသောnewရိယာသစ်ကို ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင်ပိုမိုသိရှိနားလည်လာစေရန်နှင့်ဖန်တီးရန် ဦး ဆောင်ခဲ့သည်။ စိန်ခေါ်မှုလား။ စိုက်ပျိုးရေးနှင့်ဂေဟဗေဒ၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့်ဂေဟဗေဒနှင့်ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးအတွက်နည်းလမ်းအသစ်များရှာဖွေပါ ဆိုလိုသည်မှာအနီးအနားရှိလူ ဦး ရေများကိုမဖယ်ရှားဘဲအစုလိုက်အပြုံလိုက်၏သမာဓိကိုထိန်းသိမ်းထားပါ။
ပုဂ္ဂလိကအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေ့လာရေးခရီးသွားများသည်ဒေသခံသုတေသီများကွန်ယက်ပေါ်တွင်မှီခိုနိုင်သော်လည်း၊ မက်ကာကိုသိပ္ပံနည်းကျစိတ်ဝင်စားမှုသည်ပြင်ပမှလာသည်ဟုနှလုံးရောဂါရှိသောအီဗန်ဝင်ဒန်ဘွမ်နှင့်ယိုအန်ကော်မန်းတို့ကအသိအမှတ်ပြုကြသည်။ တာနာတက္ကသိုလ်။ ပြtheနာများကိုပိုမိုနားလည်ရန်မှာမာလဂက်စီသိပ္ပံနည်းကျအသိုင်းအ ၀ ိုင်းတွင်ပိုမိုပါ ၀ င်ရန်လိုအပ်သည်မှာသေချာသည်။ Yoann Cormier က“ ဂူထဲမှာပန်းချီကားတွေမရှိတာတွေရှိတယ်။ ဤသည်ပိုမိုသုတေသနလုပ်ငန်းအလုပ်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ "
ဂူပန်းချီကားများ? လုံးဝသေချာပေါက်ဤသည်သည်မကြာသေးမီကတွေ့ရှိချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွဲနွားသူခိုးများအတွက်ခိုလှုံရာအဖြစ်မထမ်းဆောင်မီကြာမြင့်စွာကမက္ကာအစုလိုက်အပြုံလိုက်ရံဖန်ရံခါအလုပ်အကိုင်ကာလကိုကြုံခဲ့ရသည်။ မကြာသေးမီကလေ့လာစူးစမ်းလေ့လာမှုများအရဂူအနုပညာနှင့်ဖုံးလွှမ်းထားသောဂူနှင့်ကျောက်ဆောင်အမိုးအကာ ၅၀ နီးပါးရှိသည်။ မီးသွေးအနည်းငယ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းအရ၊ ဤတွင်လူသားများရှိနေခြင်းသည် ၁၂ ရာစုနှစ်အစောပိုင်းတွင်ဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော်မာလဂက်စီလူမျိုးများအား၎င်းတို့အကြောင်းပိုမိုသိရှိရန်ခွင့်ပြုမည့်ကွဲပြားခြားနားသောနိမိတ်လက္ခဏာများနှင့်ဒီဇိုင်းများကိုအနက်ဖွင့်ရန်လုပ်စရာများစွာရှိသည်။
ငြိမ်းချမ်းရေးဖျော်ဖြေပွဲ - Affou Kéïtaသည် Makosso အားကယ်ဆယ်ရန်
Ernest Obama သည်ရေဒီယိုTiémeni Siantou (RTS) သို့သွားရောက်ခဲ့သည်။
အယ်လ်ဂျီးရီးယား - ဥရောပပါလီမန်သည် ...
ဒီဆောင်းပါးသည် https://www.jeuneafrique.com/1060550/societe/madagascar-le-massif-du-makay-un-eden-a-proteger/?utm_source=jeuneafrique&utm_medium=flux-rss&utm_campaign=flux- တွင် rss- ငယ်ရွယ် - အာဖရိက -15-05-2018
Tele RELAY တစ်ခု 30576 ရေးသားချက်များ 1 မှတ်ချက်များ
ကင်မရွန်းနိုင်ငံတွင်အင်္ဂလိပ်စကားပြောသောအနောက်တောင်ပိုင်းရှိကျောင်းသားရှစ်ယောက်၏အစုလိုက်အပြုံလိုက်သတ်ဖြတ်မှုကိုအပြီးကြောက်ရွံ့ခြင်းနှင့်ဒေါသထွက်ခြင်း - Jeune Afrique
အယ်လ်ဂျီးရီးယား - ဥရောပပါလီမန်သည်လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများအားရှုံ့ချသည် - လူငယ်…